Iminyaka eli-100 ukusukela ekuzalweni kukaJohn F. Kennedy kunye neencwadi ezisixhenxe malunga nenani lakhe. | Uncwadi lwangoku
Iminyaka eli-100 ukusukela ekuzalweni kukaJohn F. Kennedy kunye neencwadi ezisixhenxe malunga nenani lakhe.
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | I-Biography, Uvavanyo, Iincwadi, Inoveli
El Meyi 29 ye1917 UJohn Fitzgerald Kennedy wazalwa, Omnye wabantu eyona nkulungwane yamashumi amabini ichaphazelekayo. Abona dongameli badumileyo baseMelika babene ubomi bunomdla njengesiphelo esibuhlungu, Iyaziwa kwaye yahlalutywa.
Los iincwadi kumzobo wakhe akunakubalwa. Izincoko, iibhayografi, intsomi, iintsomi kunye nayiphi na ithoni. Kwaye ziya kuqhubeka zibhalwa ngaphandle kwamathandabuzo. Namhlanje ndikhetha uluhlu lwe Izihloko ezingama-7 nge-JFK njenge-protagonist. Ukuze ndi ngena ngaphakathi okanye ujonge nje okuncinci kwigama elidlula kuye kunye nembali yakhe ukuba abe nguye.
1 ILibra- uDon DeLillo
2 UJohn Fitzgerald Kennedy -Iintetho (1960-1963) -Salvador Rus Rufino
3 Iincoko Zembali Malunga Nobomi Bam noJohn Fitzgerald Kennedy -Jacqueline Kennedy
4 Melika - James Ellroy
5 UJF Kennedy kunye noMarilyn Monroe -Cordelia Callás
6 Ifayile yeJFK -Nyaweni yababulali- uJosé Manuel García Bautista
7 UJF Kennedy, uBomi obungagqitywanga- uRobert Dallek
Libra -UDon DeLillo
Isihloko sale noveli sichaza Uphawu lweZodiac yaye iyintoni U-Lee Harvey OswaldUtyholwa ngokubulala Kennedy. Okanye ubuncinci, intloko ebonakalayo yelenqe elicingelwayo nelintsonkothileyo lokuzama ukumbulala. UDeLillo udlala nge I-Oswald biography.
Libra Yiyo intelekelelo yeziganeko Oko kwaxhokonxa ukubulawa kukaKennedy kunye nomoya oqhelekileyo wale minyaka xa iphupha elikhulu laseMelika laqala ukuwa phantsi laza lanika ukufihla okukhulu kukarhulumente.
UJohn Fitzgerald Kennedy - IiNtetho (1960-1963) - USalvador Rus Rufino
Le ncwadi nguRus Rufino inamacandelo amabini, isincoko esingumntu ngobomi bakhe esinamaphepha angama-42 kunye neentetho ezingama-22 Uvakaliswe nguJFK phakathi kukaJulayi 15, 1960, xa wamkela ukutyunjwa kwakhe njengoMongameli we-Democratic Presidential, kwaye nge-22 kaNovemba ngo-1963, omnye wabo wasilela ukubhengeza eTexas ngomhla awabulawa ngawo.
Iincoko zembali ngobomi bam noJohn Fitzgerald Kennedy -UJacqueline Kennedy
Libali elibaliweyo ngu inenekazi lokuqala, UJacqueline Kennedy, kwimbali kunye nePulitzer Prize, UArthur Schlesinger Jr., eyayigcinwe kuyo urekhodo amashumi eminyaka. Incoko yayisemva nje kokusweleka kukaJFK, kwaye kuyo sisihloko esiphambili, uthetha ngemikhwa yakhe, iminqweno yakhe kwezopolitiko, amaqhawe akhe ebuntwaneni okanye iminyaka yokuqala yomtshato.
America -UJames Ellroy
Kwaye ukuba sithetha ngoKennedy, asinakuphoswa ngoyena mbali umnyama kunye nolona krwada ngelo xesha lembali, uJames Ellroy. Le yincwadi yokuqala yomnxeba I-Trilogy yaseMelika yenziwe nge Isithandathu sezisongelo y Igazi leVagabond. Iyelenqe eliphambili kukuthandabuza kwezopolitiko kwexesha elinengxaki, phakathi kweminyaka ye-XNUMX kunye neye-XNUMX, eyafikelela esiphelweni ngokubulawa kukaKennedy. Kwakhona, kwaye njengesiqhelo, ingqokelela engenakubalwa ye abalinganiswa bokwenyani nabayinyani nguEllroy unikezela ngefresco yexesha esele liyintsomi.
UJF Kennedy kunye noMarilyn Monroe -Cordelia Callás
UCordelia Callás, umbhali wezincoko waseMexico, usixelela kule ncwadi imiba yobudlelwane bezothando Ukudibanisa aba nobumba babini ngelixa babonisa imeko ababangqongileyo. Yintoni udumo, iimfihlo zopolitiko, uxinzelelo losapho kunye nemidla yemafiya ekucingelwa ngamanani amabini athe aqhubeka nokujoyina ikamva elifanayo.
Ifayile yeJFK -Nyaweni yababulali -UJosé Manuel García Bautista
Kule ncwadi ulandelelwano lwamaxesha okubulala luye lwaqwalaselwa kunye nokungena kubudlelwane obunzima obukhoyo kumandla ase-US, iintshaba ze-JFK, izizathu zokumbulala kwaye ngubani onokunika i-odolo.
UJF Kennedy, uBomi obungagqitywanga - URobert Dallek
Nguwo umzobo yendoda ebiphila ubomi ngamandla kangangoko inako, nangona ngamanye amaxesha ibenzakalisa abanye abantu. Ke, sidibana noJackie oselula, silandele ukuthandana kwakhe, kwaye sijonge umtshato wakhe, esidlangalaleni nakwabucala. UDallek uhlalutya uninzi Ukungathembeki kukamongameli kwaye utyhila ezinye zazo okokuqala. Yathengiswa njenge I-biography ecacileyo kaJohn Fitzgerald Kennedy, iqhawe lamaMelika, kodwa ngaphezulu kwayo yonke into umntu oqhelekileyo, eneengxaki zakhe kunye nobuthathaka, efihlwe kakuhle phantsi komfanekiso wobomi boluntu oboyisayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » I-Biography » Iminyaka eli-100 ukusukela ekuzalweni kukaJohn F. Kennedy kunye neencwadi ezisixhenxe malunga nenani lakhe.
Iintlambo ezili-7 kunye nabaphangi bokwenene. Zakudala, ezembali kunye nothotho.
UArundhati Roy upapasha incwadi entsha emva kweminyaka engamashumi amabini